မှန်ဖို့ကောင်းလွန်းသည် - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို > မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသော
ခရစ်ယာန်အများစုသည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုမယုံကြည်ကြပါ။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သောအသက်တာမှရရှိသော်သာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်သည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။ "မင်းဘဝမှာဘာမှအခမဲ့မရဘူး။ " တကယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်အဲဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟုသူကဆိုသည်။ ဤလူသိများသောဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များကိုကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါထိမ်ချန်ထားသည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်သတင်းတရားသည်၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ၀ ံဂေလိတရားသည်လှပခြင်းထက်အမှန်ပင်ပိုသည်။ လက်ဆောင်ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်
ကွယ်လွန်သွားသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘာသာရေးပညာရှင်သောမတ်စ်တိုရင့်ကဤသို့ဆိုထားသည် -“ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်သင်၏အပြစ်နှင့်လုံးဝမထိုက်တန်သောကြောင့်သင်တို့အတွက်အသေခံတော်မူသည်။ သူသည်သင့်အားဘယ်သောအခါမျှစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ သင်သူ့ကိုငြင်းပယ်ပြီးငရဲသို့ပို့လိုက်လျှင်ပင်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။ (ခရစ်တော်၏ဖျန်ဖြေခြင်း၊ Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94) ။
အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည်မမှန်နိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်အများစုကဒါကိုမယုံတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်အများစုကကယ်တင်ခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သောအသက်တာမှရရှိသောသူများအတွက်သာရရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။
သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားကျေးဇူးတော်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအရာအားလုံးကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ဘာမျှမတတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤပြီးပြည့်စုံသောကတိက ၀ တ်၊ မဖော်ပြနိုင်လောက်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ဧဝံဂေလိတရားသည် လူတစ်ဦး၏အမူအကျင့်ကို တိုးတက်စေသည်ဟု ထင်မြင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ “ဖြောင့်မှန်၍ မှန်ကန်သောလမ်းကို လျှောက်” သူများကိုသာ ဘုရားသခင် ချစ်မြတ်နိုးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာအရ၊ ဧဝံဂေလိတရားသည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၌ 1. ဂျို 4,19 ဧ၀ံဂေလိတရားသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်သည်ဟု ဆိုသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အတင်းအကျပ် သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် စာချုပ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မပြုနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိကြသည်။ ဆန္ဒအလျောက် ပေးကမ်းနိုင်ရုံသာမက စေတနာအလျောက် လက်ခံပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အား ပေးကမ်းရန် ပျော်ရွှင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ လက်ခံစေလိုသောကြောင့် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပြီး ကိုယ်တော်နှင့် အချင်းချင်း ချစ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
In 1. ကော။ 1,30 ယေရှုခရစ်သည် ငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ငါတို့၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ငါတို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏။ သူ့ကို တရားမျှတမှု မပေးနိုင်ဘူး။ ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန် စွမ်းအားမရှိသော ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရာအားလုံးဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှေးဦးစွာ ချစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် အချင်းချင်း ချစ်ရန် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော နှလုံးသားများမှ ကြေကွဲခဲ့ရပါသည်။
ဘုရားသခင်သည်သင်မမွေးဖွားမီကသင့်ကိုချစ်ခဲ့သည်။ သင်သည်အပြစ်သားဖြစ်သော်လည်းသင့်ကိုကိုယ်တော်ချစ်သည်။ သင်သည်သူ၏ဖြောင့်မတ်။ ကောင်းမြတ်သောအပြုအမူအားဖြင့်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ပင်သင့်ကိုသူမချစ်တော့ပါ။ ၎င်းသည် good ၀ ံဂေလိတရား၏အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။